China Precision Steel Pipe Warshada iyo alaab-qeybiyeyaasha |XUANZE
Dhuumaha birta ee saxda ah waa nooc ka mid ah alaabada tuubada birta ee saxda ah ka dib sawir qabow ama daaweyn kulul.Sababtoo ah ma jiro lakab oksaydh ah oo ku yaal gidaarka gudaha iyo dibadda ee tuubada saxda ah ee birta saxda ah, ma jirto wax ka daadanaya cadaadis sare, saxsanaan sare, dhammayn sare, ma laha qallayl qallooca qabow.
Dhuumaha birta ee saxda ah waa nooc ka mid ah alaabada tuubada birta ee saxda ah ka dib sawir qabow ama daaweyn kulul.Sababtoo ah ma jiro lakabka oksaydhka ee gidaarka gudaha iyo dibedda ee birta saxda ah, ma laha qulqulo cadaadis sare, saxsanaan sare, dhammayn sare, ma laha qalloocin qabow, foorarid, fidsan iyo dildilaac ma, waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu soo saaro alaabta qaybaha sambabada ama haydarooliga, sida dhululubada hawada ama dhululubada saliidda.Waxaa si weyn loo isticmaalaa in nidaamka hydraulic birta birta, mishiinka qaabaynta irbado birta birta, mishiinka hydraulic birta birta, tuubada birta dhismaha, EVA xumbo hydraulic mashiinada, tuubada birta ee saxda ah mashiinka goynta haydarooliga, mashiinada samaynta kabaha, qalabka Haydarooliga, saliid cadaadis sare tuubada, Dhuumaha saliidda haydarooliga, wadajirka ferrule, wadajirka tuubooyinka birta, mashiinada caagga ah, mashiinada been abuurka, mashiinada dhinta-kabka, mishiinada injineernimada, tuubada bir cadaadis sare ee gaari bamka shubka, gaadiidka fayadhowrka, warshadaha baabuurta, warshadaha dhismaha maraakiibta, processing biraha, warshadaha ciidamada, Matoorka naaftada, matoorka gubashada gudaha, kombaresarada hawada, mishiinada dhismaha, mashiinada beeraha iyo kaymaha ayaa si buuxda u bedeli kara tuubada birta ah ee bilaa bilaa xadka ah ee laga keeno isla heerka.
1. Saxnaanta sare, badbaadinta isticmaalka shaqada iyo qalabka mashiinka.
2. Tilmaamo badan iyo kala duwanaansho codsi oo ballaaran.
3. Badeecada duubista qabow waxay leedahay saxnaanta sare, tayada dusha sare iyo toosnaanta wanaagsan.
4. Dhexroorka gudaha ee dhuumaha birta ayaa laga dhigi karaa hexagon.
5. Waxqabadka dhuumaha birta ayaa ka sarreeya birtana waa cufan.
Habka socodka tuubada birta ee saxda ah:
Tubbo madhan -- Baadhitaan -- diirin -- Baadhitaan -- Kuleyl -- dalool --qaadis-qaadid -- shiidi -- saliidayn iyo hawo qallajin -- rogaal-qabow -- hoos u-dhigid -- gooyn -- Kormeer -- calaamadayn -- alaab dhammaatay. baakad
Dhuumaha birta saxda ah waxaa si weyn loogu isticmaalaa baabuurta, mooto, baabuur koronto, petrochemical, awoodda korontada, markabka, aerospace, dhalista, qaybaha pneumatic, tuubada birta ah ee dhexdhexaad ah iyo kuleyliyaha cadaadis hoose, iyo sidoo kale loo isticmaali karaa in gacan bir ah, sida, Haydarooliga. , farsamaynta farsamada iyo qaybaha kale
TUBO bir ah oo aan toos ahayn oo sax ah
Badbaadinta isticmaalka shaqada iyo agabka mashiinka
Tilmaamo badan iyo kala duwanaansho codsi oo ballaaran.
Qaabka saxda ah
Dhexroorka gudaha ee dhuumaha birta waxaa laga dhigi karaa hexagon.
Tayada dusha sare,Toosin wanaagsan.
Alaabada duubista qabow waxay leedahay saxnaanta sare, tayada dusha sare iyo toosnaanta wanaagsan.
Dhuumaha birta ah ee qabow-gaaban
Habka socodka Shaxda
Hore: Dhuumaha Birta Darbiga Culus
Xiga: Habaynta Dhuumaha Birta
Dhuumaha birta dalool - Punch
St52 Dhuumaha aan Xumaan lahayn, Dhuumaha Haydarooliga, Dhuumaha Kaarboon Aan Xumaan lahayn, At 179 Tube aan cillad lahayn, Birta Kaarboonka ee aan Xumaan lahayn, Dhuumaha Birta ee Tooska ah ee aan Xirnayn,